Recap kwa ọnwa: June na Casino Extreme - pisklak.net
Recap kwa ọnwa: June na Casino Extreme
Anyị enwetala ụbọchị iri atọ nke ihe omume dị egwu, egwuregwu ọhụụ na ngwa ngwa ịwepụ na cha cha cha cha cha. Nke a bụ ọnwa nke ọtụtụ ihe na-akpali akpali nke kpaliri anyị ịrụsi ọrụ ike idebe ebe a dị ka ebe nzọ gị dị mma. Soro anyị site na nyochaghachi kwa ọnwa iji chọpụta ihe June dị na Casino Extreme.
June bụ ọnwa buru ibu ma a bịa n’egwuregwu ọhụrụ. Ndi si RTG juru anyi anya dika ihe ato ato ohuru. Ná mmalite nke June, anyị nwetara nsụgharị emelitere nke otu n’ime oghere ndị kachasị ewu ewu n’etiti ndị egwuregwu anyị. N’ime oghere Asgard Deluxe ndị ama ama ama ama laghachitere na egwuregwu zuru ezu dị na Valhalla. Oghere a na-enye ụfọdụ atụmatụ dị egwu, ebe ihe nkiri vidiyo dị ịtụnanya.
Emepere otu egwuregwu emelitere ọzọ n’ọnwa gara aga. Jackpot Cleopatra’s Gold Deluxe oghere na-enye ọhụụ nke oge a na imepụta egwuregwu emelitere. Dị ka egwuregwu mbụ, Cleopatra bụ akara ngosi kachasị mkpa nke na-enye gị ọtụtụ atụmatụ dị ukwuu na 5 reels. Ndị na-abawanye n’ime egwuregwu, egwuregwu egwuregwu na 3x multipliers, yana jackpot na-aga n’ihu na ntanetị bụ ihe ị ga-atụ anya inyere gị aka imeri nnukwu.
Anyị mechiri ọnwa a dị ịtụnanya na otu egwuregwu dị oke egwu, oghere Miami Jackpots. Nke a 5-esi anwụde oghere na 20 paylines ka atọrọ na Ocean Drive, kacha ewu ewu n’okporo ámá na Miami. Ihe ngosi agbasasị bụ akara ngosi Miami nke na-akwụ ụgwọ mgbe ọ na-egosi ebe ọ bụla na egwuregwu egwuregwu. Ihe nnọchianya anụ ọhịa na-anọchi akara ndị ọzọ niile ma e wezụga ikposa na akara jackpot.
Abụọ pụrụ iche atụmatụ nwere ike dịkwuo gị na-emeri Ohere. Ọ bụrụ nakọtara n’etiti abalị atọ na atọ na ọnwa iri ọ bụla na atụ ogho, ị ga – ebute njirimara Jackpot. Ọzọ dị mma mma bụ Pick daashi Njirimara ga-akwụ gị ụgwọ na a ụyọkọ nke free spins.
Nkwalite na June
Ọ bụrụ n’ị bụ onye na – agụ blọọgụ na – eguzosi ike n’ihe mgbe ahụ ị mara na cha cha cha cha cha cha bụ ihe na-eme ka mmadụ chee echiche. Usọrọ Nna Day anyị nyere gị ohere dee banyere e nyere isiokwu maka ụgwọ ọrụ nke 50 free spins. Ihe kariri ihe ntanetiri 200 biara ma nye ndi natara ugha dika ha kwere nkwa.
Anyị na-eme nnukwu ụbọchị nnukwu ego na June na nnukwu ego cha cha. Flag Day promo mere ụbọchị abụọ ị nwere ohere ị nweta nnukwu ego. Ọzọkwa, e debeere June ka ọ bụrụ ego Litecoin na-ekpo ọkụ na cha cha cha cha cha ngwa ngwa. Ọtụtụ Kupọns nwere akara cha cha pụrụ iche dị njikere ime ka ị nwee mmeri. E nwere ihe niile na-amasị gị a otutu, free spins, cashbacks, ọ dịghị mmachi bonuses, wdg Koodu na-agbanwe agbanwe ọ bụla ụbọchị abụọ. Naanị iji chetara gị na onyinye July malitere na ọbụna nnukwu cha cha bonuses.
Anyị maara na otu n’ime isi ihe dị na cha cha cha nwere ike ịdọrọ mmeri gị n’otu ntabi anya. Anyị na-eme ike anyị niile iji nyefee gị ya n’ụzọ kachasị ọsọ. N’ihi nke a, anyị na-ghọtara dị ka onye na ndọrọ ego cha cha. N’ọnwa June, anyị wepụtara ọtụtụ ndị na-ewepụta ego na nke kachasị $ 14,666.58. Ọzọkwa, ụfọdụ ndị egwuregwu amaara ama wepụrụ ihe karịrị $ 9000, ma ọtụtụ nkwụghachi ụgwọ karịrị $ 6000.
Kasị Egwuru Egwu na Egwuregwu Kacha Ego na June
Playersfọdụ ndị egwuregwu na-enwe mmasị ịmara egwuregwu ndị ama ama na cha cha tupu ha amalite igwu egwu. Ndị ọzọ nwere mmasị ịmara egwuregwu ndị nyere nnukwu ụgwọ. Anyị nọ ebe a iji zaa ọchịchọ gị niile ma kpughee ozi a.
Egwuregwu kacha egwuri egwu: Ahịa Halloween, Akụ Bara ụba, Ego Ego 3, Fire Fire 7, na Goldbeard.
Egwuregwu kachasị akwụ ụgwọ: 5 Wishes, Epic Holiday Party, European Roulette, Gods of Nature, and Poker Jackpot Poker.
Oghere ndagwurugwu na June
Dị ka kwa ọnwa, ọtụtụ ndị egwuregwu sonyere asọmpi kwa izu na ngwụsị izu anyị. N’ọnwa June ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 2000 n’ime ha sonyere na ụfọdụ, mana ndị kachasị egwuri egwu bụ Extreme Weekly na June 21st. Egwuregwu kachasị ewu ewu bụ oghere Gold nke Cleopatra.
Nke ahụ ga-abụ ihe niile gbasara June na Casino Extreme. Naanị iji chetara gị ka ị payaa ntị na Litecoin, n’ihi na onyinye pụrụ iche na-aga n’ihu na July!